हुर्काउँदै फुटबलरपोखराको अन्तिम दक्षिण कुनोमा पर्छ, दोबिल्ला। यहाँ फुस्रे खोला सेती नदीमा मिसिन्छ, अनि दुवै एक भएर बग्छन्। त्यसपछि कुन पानी सेतीको, कुन फुस्रेको छुट्याउन सकिन्न।त्यही दोबिल्लामा छ, सहारा एकेडेमी, जहाँ...	फुटाउने हातमाघ ८ को पूर्वसन्ध्यामा संविधानसभाभित्र माइक, कुर्सी, बेन्चलगायत फुटाउने कार्य भए। नेताहरू भन्छन्, ‘शोषित, पीडित, गरिब र निमुखा जनताका लागि संविधान बनाउनका लागि यसो गर्नु बाध्यात्मक परिस्थिति हो।' जनता के...	कवि कहिल्यै बूढो हुँदैनहेर्नेहरू भन्थे, 'मालती–मंगले' नाटक हेर्दा जस्तै कठोर मान्छे पनि रुन्छ। सो गीतिनाटक चितवनको नारायणगढमा पनि मञ्चन भयो। त्यतिबेला म ११–१२ वर्षको हुँदो हुँ। बासहित स्कुलबाट सबै शिक्षक जाने भए। मैले बालाई...	युगका आँखाभानुभक्त आचार्य नेपाली भाषा र साहित्यका एक अविस्मरणीय नक्षत्र हुन्। उनको व्यक्तित्व र कृतित्वका समग्र पाटाहरूलाई केलाउन थाल्ने हो भने एउटा युगको सिंगो अवतरण हुन सक्छ। समय सीमालाई अगाडि राखेर...	एउटा पुरानो छापामार
मधुवन पौडेल 'हान्ने राँगोजस्तै भएर आइस् नि? आँखा पनि राता न राता छन्! के भो तँलाई ए शंकर?'फलैँचामा ढल्केर तमाखु तानिरहेका जिम्मावालबाजेले उसलाई हेर्दै भने। आँगनभरि बिस्कुन सुकाइएको थियो, तुलसीको मोठपछाडि दाउराको चाङ, एउटा कुनामा मकैका घोगाको थुप्रो अनि केही पर गोठबाहिर… विस्तृतमा
दुइटा नाक भएका मान्छे
हरिशंकर परसाईं म उनलाई सम्झाइरहेको थिएँ, छोरीको बिहामा फजुल खर्च गर्नु हुन्न।मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै ती वुज्रुगले भने, 'तपाईंले भनेको ठीक त हो, तर नातागोताका सामु नाक काटिन्छ नि!' विस्तृतमा
अशेष मल्ल तीस–एकतीस सालतिरको धनकुटा। गोकुण्डेश्वर हाइस्कुलको सानो हलमा नियमित नाटक मञ्चन गर्थ्यौं। टिकटमा नाटक मञ्चन हुने परम्परा धनकुटामा सम्भवतः त्यही समयबाट सुरु भयो। मेरो औपचारिक अभिनय यात्रा पनि त्यहीँबाट सुरु भएको हो। विस्तृतमा
डा. देवीप्रसाद सुवेदी कुनै गलत कुरालाई धेरै पटक दोहोर्यािएर सत्य प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रयासमा कतिपय मानिस लागिरहेका हुन्छन्। यहाँ भने त्यस्ता मानिसको होइन प्रवृत्तिको कुरा गर्न खोजेेको छु। त्यस्तो गलत प्रवृत्ति लेख्य नेपाली भाषामा नजानिँदो किसिमले मौलाउँदै गएको छ र नेपाली भाषाका जानिफकार… विस्तृतमा
सपनाको उडान भर्दै
अमृत भादगाउँले उनी हवाइजहाज उडाउँछन्। नेपालमा होइन इन्डोनेशियामा। त्यहाँको लायन एयरका प्रशिक्षक पाइलट भएकाले अरु पाइलटलाई सिकाउँछन्। लायन एयरको छातामुनि ५ सय भन्दा बढी पाइलट र चार हजार बढी एयर होस्टेज छन्। विस्तृतमा
StartPrev123…NextEndPage 1 of 138	भर्खरै...